Moments leh saaxiibo 48
NAGU SAABSAN ▼ ︎
KOOXAHA ▼ ︎
Amar ▼ ︎
Ku raadi qaybo ku saabsan Hooyooyinka asxaabta
Xuquuqda, 1913, by HW PERCIVAL.
KU SAABSAN ARDAYDA ARRIMAHA.
Ma u fiican tahay inuu nin ka tago jirkiisa jir ahaaneed oo aan ogsoonayn, in nafta uu geli karo dawladiisa?
Waxaa ugu wanaagsan nin xilkas ah inuu ka digtoonaado waxkasta oo uu ku sameeyo jireed iyo xaalad kasta oo kale oo jiritaanka. Haddii nin — nin oo macnihiisu yahay mabda’a fikirka miyir-qabka ee jirka- uu go’aansado inuu ka tago jirkiisa jireed, kama tago isagoo miyir qaba; Haddii uu ka tago jidhkiisa isagoo aan miyir lahayn, arrinta doorashada kuma leh.
Looma baahna naftu - iyada oo qaadata in "nin" iyo "nafta" ay ku jiraan su'aasha loogu talagalay in ay isku mid noqdaan - in laga tago jirkeeda jir ahaaneed si ay u gasho xaaladdeeda riyadeed. Dadku had iyo jeer, had iyo jeer, waxay ka baxaan jirkiisa jir geerida ka hor.
Dadku wuu miyir qabaa xaaladdiisa; wuu ku baraarugsan yahay riyada; isagu miyir qabo inta lagu gudajiray ilaa laga soo tooso ilaa riyada; taas oo ah, inta u dhexeysa daqiiqada ugu dambaysa markuu soo jeedo iyo bilowga riyada. Gudbinta jir ahaaneed iyo heerka riyada waxay u dhigantaa geerida; iyo in kasta oo fikirka iyo ficilku uu go'aansado waxa iyo sida kala guurka uu noqon doono, ma garanayo mana garanayo u gudbitaanka goortu waqtigeedu dhammaaday, in kasta oo laga yaabo inuu yeesho waxoogaa aragti ah soo gudbinta.
Markii nin barto sida loo galo iyo sida looga tago marxaladda riyada markii la doono, wuxuu joogsadaa inuu noqdo ninka caadiga ah, waana wax ka badan ninka caadiga ah.
Dhererkee ayuu qofku ku gaadhi karaa qofka jirkiisa jirkiisa ka tagay, miyuu jiraa miyir qabka ka dib?
Taasi waxay kuxirantahay waxay ahaayeen fikradaha iyo ficillada waxa shaxeeyuhu u magacaabayo sida nafta, iyo helitaanka maskaxda iyo ruuxiga ee nolosha kale ee jirka iyo gaar ahaan tan ugu dambeysay. Haddii nin ka tagi karo jirkiisa jir ahaan asaga oo dhimanaya, wuu diidayaa ama ciqaabayaa dhimashada. Ha noqotee in qofku ku soo maray geerida si miyir ah ama uu miyir qabo, gobolka miyirkiisa, oo uu gali doono, u dhigmo oo waxaa go'aaminaya waxa uu ka soo helay aqoonta noloshiisa jidh ahaaneed ee dhulka. Qaadashada iyo lahaanshaha lacag fara badan iyo waxa adduunku leeyahay, ha yeeshee si weyn, ama meel bulsho, ama aqoonna u lahayn dhaqanka iyo shirarka, ama khaldanaanta iyo aqoon u lahaanshaha ragga kale. Midkoodna looma xisaabayo. Helitaanka dhimashada ka dib waxay kuxirantahay heerka sirdoonka ee ninku gaadhay inta uu noolyahay; waxa uu ogyahay inay nolosha tahay; xakamaynta rabitaankiisa; xagga tababarka maanka iyo dhamaadka waxyaalaha uu u adeegsaday, iyo sida uu u arko fikirka dadka kale.
Nin kastaa wuxuu sameyn karaa nolosha fikradaha gobolka ka dib dhimashada isagoo garanaya wuxuu "yaqaan" iyo waxa noloshan ku sameeyo naftiisa, iyo waa maxay aragtidiisa ku wajahan adduunka dibadiisa. Maaha waxa ninku dhaho iyo waxa uu rumeysan yahay ee ku saabsan dhimashada ka dib ma arki doono dhimashada ka dib. Siyaasadda diintu waxay isu beddeshay qodobbada caqiidada iyo aaminsanaanta fiqiga ee rajada ka qaba ama xanaaq ka dhan ah adduunka u horseedda inay dadku ka digtoonaadaan oo ay helaan dhimashada ka dib wixii ay horay u maqleen, xitaa haddii ay rumeysanayeen wixii ay maqleen. . Xaaladda dhimashada ka dib looma arko inay tahay meesha ugu kulul ee loo diyaariyey kuwa aan rumeysnayn, sidoo kale aaminaad la'aanta iyo xubinnimada kiniisadda ayaa ahmiyad siisa meelaha laga xusho jannada. Rumaynta dawladaha dhimashada kadib waxay saameyn ku yeelan kartaa goboladaas kaliya illaa iyo inta ay saameyn ku leeyihiin gobolka maskaxdiisa iyo ficilladiisa. Samada ma jiro ilaah jira oo binu-aadmiga ka soo bixiya dunida iyo laabtiisa; Ma jiro wax jinni ah oo ku soo dhaca dadka marka uu ka gudbayo dunida, wax kasta oo waxa uu rumeysan yahay ay ahaayeen inta lagu guda jiro nolosha, ama wixii loo yaboohay ama loogu hanjabay fiqiga. Cabsida iyo rajada ka hor dhimashada ma baddali doonto xaqiiqada ka dambeysa dhimashada dhimashada. Xaqiiqada asal ahaan ka soo jeeda iyo qeexida nin dhimashada ka dib ayaa sheegta: waxa uu yaqaan iyo waxa uu ahaa dhimashada ka hor.
Dadku wuu khiyaanayn karaa dadka naftiisa inta uu dunida joogo; ficil ahaan wuxuu baran karaa inuu iskiis isaga khiyaaneeyo naftiisa inta uu noolyihiin jirkiisa; laakiin isagu ma khiyaanayn karo Sirdoonkiisa Gaarka ah, ee Nafsadda, sida mararka qaarkood loo yaqaan, marka loo eego wixii uu ka fikiray ama sameeyey; waxkasta oo uu ka fikiray ama ku xayiray waa si faahfaahsan oo guud ahaanba si toos ah maankiisa loogu diiwaan galiyaa; iyo sida ku cad sharciga aan sharciga lahayn ee caalamiga ah ee aan sharciga lahayn, oo aan rafcaan lagaheyn, meelna uga baxsan karin, waa isaga wixii uu ku fikiray ama xayiray.
Dhimashadu waa geeddi-socod gooni u goosad ah, laga soo bilaabo wakhtiga laga tegayo jidhka jir ahaaneed oo lagu miyir-qabo xaaladda jannada. Dhimashadu wax walba waxay ka soocdaa ninka aan ahayn kan jannada. Jannada ma lahayn meel uu ku bixiyo mushaharkiisa. Haddii qofku jeclaado iyaga la'aantood jannada ma geli karo. Kaliya isaga ayaa geli kara jannada oo ah gobolka jannada, iyo waxa aan lagu xukumi karin cadaabta. Addoomada mushaharka ah iyo dhulka iyo bangiyadaha ayaa weli ku jira dunida. Haddii nin u maleeyo inuu haysto iyaga intuu ku noolaa dhulka, wuu qaldamay. Isagu ma yeelan karo. Wuxuu heshiis kiro ku yeelan karaa waxyaabo, laakiin isagu wuxuu leeyahay oo keliya wixii uusan lumin karin. Waxa ninku lumin kari waayo ayaa jannada la gelayaa, wuxuu ku sii jiraa dhulka, weligiisna wuu ogyahay. Waxaa laga yaabaa inuu dul mariyo oo uu dhulka ku daboosho wixii aan lahayn, laakiinse weli wuu og yahay. Xaaladda maskaxeed ee uu ninku galo oo garto inta uu nool yahay wuu soo galayaa oo wuu gartaa geerida ka dib, halka nolosha jidhka ay ku wareersan tahay dhibaatooyin iyo daryeel adduun. "Dhaadheer", ama cirka, waxa uu ka warqabo waa ka xor ka ahaanta cabsi iyo xanaaq. Wax kasta oo ka hortagga farxadda adduunka waa laga tirtirayaa gobolkaas.